Ukwahlukana Nomntu weScorpio: Yonke into ekufuneka uyazi - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Ukwahlukana Nomntu weScorpio: Yonke into ekufuneka uyazi
Ukwahlukana Nomntu weScorpio: Yonke into ekufuneka uyazi
Akukho nto ingako inokwenziwa xa usaphuka nendoda yeScorpio. Nokuba angafuna into enye, uya koyika ebona indlela evulekileyo ngayo iqabane labo malunga nokwahlukana kwaye angafuna ukubaleka ngokupheleleyo.
Kulula kubo ukuhlangana nomntu omtsha kwaye bayeke iimvakalelo abanazo ngomnye, ke ukuba ukwahlukana emva kwemeko enje, ngekhe bakhathalele kangako.
Izinto eziphezulu ezi-5 zokwazi malunga nokwahlukana nendoda yeScorpio:
Uya kuhamba kuwo onke amanqanaba, ukusuka ekwenqabeni ukuya ekwamkelweni.
Uya kuhlasela iqabane lakhe aze alisole ngokungaphumeleli.
Usenokuzama ukumbuyisa ngalo lonke uhlobo lokukhohlisa.
Ngokunokwenzeka, ukuvalwa kuya kufunwa ngobudlelwane obuphindiweyo.
Unokukhalaza kuwo wonke umntu kwaye adlale ixhoba.
I-ex yeScorpio egculelweyo kufuneka ilumke kuba la madoda athambekele ekubekeni iliso kwi-fling yabo yangaphambili emva kokwahlukana. Xa benqatshiwe, aba bantu baphindisela ngokumangalisayo, singasathethi ke ukuba abanakuze balibale okanye baxolele, kunqabile kuphela.
Ukwahlukana njani nendoda yeScorpio
Kungoyikisa kakhulu ukuba neqabane leScorpio elalayo ukuya xa licelwa ukuba lihlukane. Lo mqondiso uzinzile, ke umntu ongowakhe unamathela ebantwini ebomini bakhe, ngakumbi amaqabane akhe.
Ngapha koko, umqondiso wakhe ngowento yamanzi, ebonisa ukuba unamandla ngokweemvakalelo kwaye unzulu kakhulu kwindlela yakhe yokucinga.
Ke ngoko, umfazi ofuna ukwahlukana naye unokufuna ukuzilungiselela kuba izinto azizukuba lula.
Uyakufumana onke amanqanaba amahlanu osizi, ukusuka ekwenqabeni ukuya ekwamkelweni, emva koko akasayi kuphinda afune ukuva malunga nomntu omlahlileyo.
Ukuba uthatha isigqibo sokuzibeka ityala kukhetho lwakhe kuphela, kodwa lo mfazi unokuqiniseka ukuba uya kubeka ityala kwaye amhlasele ngendlela nganye anokuthi ayenze, nto leyo ethetha ukuba kungafuneka azinike ikhefu kwaye acinge ukuba angabaxwa.
Indlela yokumenza afune ukuyeka ubudlelwane buqu iya kuba kukuthatha izinto kancinci nokwenza ubomi isihogo esiphilayo kuye.
Ukudlala ngengqondo yakhe nokubanda, ukumjonga ngokungathi angaphambana kwaye agqwethe iinyani xa ecela ingcaciso inokuba zizinto nje ekufuneka zenziwe.
Unokuphela eqinisekile ukuba kukho into engalunganga ngaye okanye ukuba iqabane lakhe libangela ukuba aphambane. Xa kungaboni nto izakutshintsha kwaye imeko ithathwa njengesiqhelo liqabane lakhe, uya kuthatha isigqibo sokuhamba.
Abo baceba ukushiya indoda eScorpio kufuneka bahambe ngamaqokobhe amaqanda ejikeleze lo mntu kuba unuka kude xa kukho into eyenzekayo.
loluphi uphawu lwe-zodiac ngoNovemba 24
Enye indlela yokuba emke yedwa kukucinga ukuba ungubani na. Uyaziwa ngokugcina iimfihlo malunga nobuntu bakhe kwanobomi bakhe babucala, ke xa uzama ukumenza phambi kwabanye, unokucaphuka ngokwenene.
Ngapha koko, akabathandi abafazi abarhashazayo njengoko emangalisa kwaye emhle. Ufuna umntu o-sexy ongakhathaliyo ukuba ungowakhe njengoko enayo kakhulu.
Abafazi abaphezulu abasoze bathande yena, okanye abo bangakwaziyo ukuzichaza ngokucacileyo. Uzinze kakhulu kwiinkolelo zakhe, ke ulindele ukuba nenekazi lakhe lifane.
Kuba ulunge kakhulu ekufumaneni ubuxoki, xa exelelwa into engeyonyani, ukuthembana kwakhe kuya kuhlala kuphule kwaye unokufuna ukuphuma kulwalamano.
Umfazi ongasafuniyo ukuva ngendoda yeScorpio kwakhona kufuneka ahlekise ngaye esidlangalaleni. Unokubonakala engaqondakali kwaye omelele, kodwa enyanisweni ubuthathaka kakhulu, ke ukuphoxeka esidlangalaleni kuyinto enkulu kuye.
Xa uphikisana nale ndoda, iqabane elifuna ukumshiya kufuneka limfulathele liphume egumbini. Uhlala exhalabile ukusombulula iingxabano ngokukhawuleza, ke iimvakalelo zakhe ziya kufumba emva kwengxoxo nganye, de kube yeyokugqibela.
Isini kakhulu, indoda yeScorpio ayinakuze iwele kumfazi ongakhululekanga emzimbeni wakhe. Ucinga ngokwenza uthando njengolunye uhlobo lwenkolo, ke isithandwa sakhe kufuneka sikuqonde oku ngaye.
Akakuthandi ukubuzwa imibuzo emininzi, ke owasetyhini oya kuthi ngalo lonke ixesha azame ukufumanisa izinto ngobomi bakhe kunye neemfihlo zakhe kungekudala uza kuboniswa umnyango. Ngaphezu koku, akayithandi into yokuba abasetyhini bamphatha njengomntwana wabo.
Ngelixa anokungakhangeli umntu oza kubambelela kuye ngalo lonke ixesha, ufuna ukubona umdla wesini komnye, ukuze agxothwe kude ngokungakhathali okupheleleyo.
Indoda yaseScorpio iluphatha njani ulwahlulo?
Indoda yeScorpio ingenza umfazi azive ngathi nguye kuphela ehlabathini okanye angamphatha njengomntu owenze into embi.
Xa esaziswa malunga nokwahlukana okunokwenzeka, akazukukwazi ukuba enze inyathelo lokuqala lokuya kwiqabane lakhe okanye angamhoyi, oku kumtyisa ngaphakathi okwethutyana.
Kuyenzeka ukuba lo mthonyama athathe isigqibo sokuba i-ex yakhe ifuna ukubuyiselwa kwaye ifundiswe isifundo kuba ayinakuhlala nje embindini, le ingekho kwindalo yayo. Ukuba uqinisekile ngesiqu sakhe kwaye ulungile ngayo, uya kumhoya ngonaphakade.
uphawu lwe zodiac lwedisemba 3
Nangona kunjalo, indoda engakhuselekanga ngakumbi yeScorpio iya kuthi iqabane layo likhulule iimpahla zalo ngokuzilahlela. Oku kuxhomekeke kakhulu ekubeni ngubani othathe isigqibo sokuphelisa izinto, isizathu sokuba ubudlelwane buhambile kunye nokuvalwa okukhoyo phakathi kwamaqabane, into ebeya kuba sele eyigubungele.
Umfazi owahlukana nale ndoda uyayikhumbula indlela awayekhuthazeka ngayo kwaye omelele, ikwayindlela awayeyikhathalela ngayo ngamaxesha anzima.
Nangona kunjalo, akazukufuna ukukhumbula ukuba wayemcathama njani, ngaphandle kwakhe ukuba acinge ukuba kungakho into engalunganga ngendlela yakhe yokumlandela ejikeleze yonke indawo. Eyona nto yoyikisayo le ndoda sesona sithandwa sayo sithatha isigqibo ngokuzikhethela ukuba sishiye ubudlelwane kunye naso.
Oku kuyamoyikisa umntu weScorpio ngokunzulu zombini umphefumlo wakhe kunye nengqondo. Uninzi lwexesha, iiScorpios zihamba ngenxa yokubandakanyeka kuhlobo oluthile lwamandla okwahlulahlula kunye neqabane labo.
La madoda athe phithi kukulawula, uninzi lwabathandayo luthatha isigqibo sokushiya bebona indlela abanokukhohlisa ngayo nabanakho ngayo. Isenokungabi yinto elula ukubalahla ngokulula kuba bakufumanisa kunzima ukukuyeka kwaye baqhubeke nobomi babo emva kokwahlukana.
Ngelixa abantu kweminye imiqondiso banokuqonda ukwahlukana kubandakanya ukuphela, amadoda eScorpio acinga ngokwahlukileyo kwaye afuna ukwenza izinto zisebenze kwakhona, engacingi nokucinga ukuba ukuhamba phambili kunokuthetha ntoni.
Indoda yaseScorpio iyakwazi ukuqonda ukuba ubudlelwane bayo benziwe kwaye iqabane layo alisamfuni, kodwa uya kuhlala enethemba lokuba ngenye imini uya kutshintsha ingqondo.
Esi sizathu sokuba ajonge ukuba ngumhlobo nabafazi emva kokuba bohlukene naye.
Ukwazi eyona ex yakhe ayithandayo, ucinga ukuba imenze abuyele kuye kwakhona kuya kuba lula kakhulu kwaye uya kunika konke anako ukuze izinto zenzeke ngale ndlela.
Nawuphi na umntu wasetyhini akufuneki azi ukuba akukho nto inokugcinwa ifihliwe kwindoda yaseScorpio njengabantu abakulo mqondiso babonakala ngathi bane-radar yokufumana ubuxoki, iimfihlo kunye nezinto ezihlazo.
Aba bemi bomhlaba bayazi ukuba ukuzuza amandla kuthetha ukwazi iinkcukacha ezingathandekiyo ngobomi babanye kwaye nokuba yimfihlelo malunga nokwabo.
Ingxaki kubo kukuba kunokuba nzima ukuchonga ingxaki ngokuziphatha kwabo kude kube semva kwexesha.
Imfihlo kakhulu kwaye iyimfihlo, iiScorpios zifihla ubuntu bazo ngasemva kwesigqumathelo esipholileyo, ngelixa zingaphantsi, zizaliswe ngumnqweno olungele ukukhutshwa.
Xa beveza izimvo zabo, banokuveza izinto ezithile ezenzakalisayo malunga neqabane labo kwaye akukho nto anokuyenza. Akunandaba nokuba kukho into enhle eyenzekileyo okanye ukuba kukho into embi eyenziwe, i-Scorpios iya kukhumbula ngonaphakade yonke into kwaye ibuyisele wonke umntu ochaphazelekayo.
Xa bekwimeko entle nomntu okhethekileyo ebomini babo, baya kuhlala bethembekile ngokungapheliyo, ngelixa bewela, baya kufuna ukuziphindezela bade bayikhonze. Aba bantu badume ngokuba nenkohlakalo kunye nabaxhaphazi be-zodiac. Abo babuthathaka kwaye abanako ukuzikhusela kufuneka bahlale kude nabo.
Umdlalo ofanelekileyo weScorpio: Ngowuphi Abahambelana kakhulu naye?
I-Scorpio Man ukuhambelana kothando
Iimpawu zeScorpio, iiNdlela eziLungileyo nezingalunganga
indlela yokuqonda umntu we-libra
Umfazi weDragoni: Iimpawu eziPhambili zoBuntu kunye nokuziphatha
Ukuhambelana kweScorpio kunye neAquarius
ukuhambelana kweesemari kunye nee-aries ngokwesondo
i-taurus yabasetyhini kunye ne-aries eyindoda
Indoda e-gemini kunye nokuhambelana komfazi ne-capricorn
ukuqonda umntu we-virgo othandweni
uphawu lwe-21 zodiac yi-taurus okanye i-gemini
loluphi uphawu lwesi-19 sept